त्रिभुवन विमानस्थलबाट २३ वर्षीय विशाल पक्राउ ! यो उमेरमै गरेछन बिश्वासनै नलाग्ने यस्तो काम – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र १४, २०७८ समय: १६:००:५४
August 30, 2021SanamLeave A CommentOn त्रिभुवन विमानस्थलबाट २३ वर्षीय विशाल पक्राउ ! यो उमेरमै गरेछन बिश्वासनै नलाग्ने यस्तो काम
काठमाडौं, भदौ १४ – बैङ्किङ्ग कसुरको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ईलामको सूर्योदय नगरपालिका घर भएका २३ वर्षीय विशाल रेग्मी छन् । जनकपुरबाट बुद्ध एयरको उडानमार्फत काठमाडौँ आएका रेग्मीलाई आन्तरिक टर्मिनलबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जानकारी दिएको छ । विशालले ललितपुर बस्ने विनन्जय थापालाई दिएको कुमारी बैङ्कको चेक बाउन्स भएपछि थापाले प्रहरीमा उजुर गरेका थिए । २०७६ भदौमा चेक दिएर फरार भएका रेग्मीलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागी महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा पठाइने महाशाखाले जनाएको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
यस्तै, एक महिलासँग घुस लिएको आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुईजना प्रहरीलाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरी वृत बौद्धबाट खटिएको टोलीले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सञ्जीव बस्नेत र जवान सुरज खड्कालाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख अशोक सिंहले जानकारी दिए। बौद्धकी एक महिलालाई तपाइँसँग लागुऔषध रहेको सुचना पाएका छौं, पैसा नदिए पक्राउ गर्छौं’ भनेर ९० हजार घुस लिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको सिंहले बताए। बस्नेतको दरबन्दी केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदल, कपनमा र खड्का विमास्थलमा कार्यरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ गरिएकाहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि दरबन्दी भएको स्थानमा पठाइएको सिंहले जानकारी दिए।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
पहिरोले घर पुरिँदा पाल्पामा १० वर्षीया बालिकाको मृत्यु
August 29, 2021 admin ebihaniसमाचार / स्वास्थ्यNo Commenton पहिरोले घर पुरिँदा पाल्पामा १० वर्षीया बालिकाको मृत्यु
काठमाडौं । पाल्पामा पहिरोमा पुरिएर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । आईतबार बिहान वर्षासँगै आएको पहिरोले घर पुरिदा एकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा तानसेन नगरपालिका–१० कैलासनगरका नारायण दर्जीकी १० वर्षीया छोरी नैना रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
पहिरोले नारायण दर्जीको एक तले कच्ची घर पुरिएको थियो । स्थानीयको अनुसार नैना सुतिरहेको अवस्थामा पहिरोले किचेर गम्भीर अवस्थामा थिइन् । त्यसपछि उनलाई उपचारको लागि अस्पताल लगिएकोमा उनको मृत्यु भएको हो ।
यो पनि: हेलम्बु राजमार्ग अवरुद्ध -लगातारको वर्षा र बाढीले निरन्तर पहिरो खस्दा हेलम्बु राजमार्ग पुनः अवरुद्ध भएको छ । मेलम्ची नगरपालिका–१३ मेलम्ची–जिरोकिलो सडक खण्डस्थित फटकशिला रातोपहरोमा माथिबाट पहिरो खसिरहेकाले सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पैराबारीका घर जोखिममा – बाटो माथिबाट पहिरोसँगै ढुङ्गा खस्दा मेलम्ची–१० रामपुर पैराबारीका घर जोखिममा परेका छन् । गतवर्षदेखि नै पैराबारी ज्यामिरे बाटो खन्ने क्रममा ढुङ्गा खसेर बसेको र यस वर्ष पनि ढुङ्गा ख स्ने क्रम जारी रहेको स्थानीयवासी प्रशान्त कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बाटोमुनि तीन भूकम्पपीडितको राहत घर र अन्य दुई घर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ढुङ्गा खसेर दुर्घटना हुने डरले आनन्दले बस्न सुत्न नसकिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । ढुङ्गा ठूलो रहेको र पहिरो पनि आइरहेको जानकारी पोहोरदेखिनै नगरलाई गराए पनि चासो नदिएको उहाँले दुःखेसो गर्नुभयो । पानी पर्न थालेपछि घर छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नगरको स्थानीयवासीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
Last Updated on: August 30th, 2021 at 4:00 pm